मीन राशि हुनेको वैवाहिक जीवन सुखद कसरी बनाउने ? – Complete Nepali News Portal
मीन राशि हुनेको वैवाहिक जीवन सुखद कसरी बनाउने ?
आउनुहोस् मीन राशि हुनेको वैवाहिक जीवन सुखद कसरी बनाउने ?, भन्ने विषयको सामग्री शुरू गर्नु भन्दा पहिला यो मन्त्र उच्चारण गरौँ ः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः श्री अवधूत चिंतन गुरुदेव दत्त, त्रिमुख दिगंबर सद्गुरु दत्त, श्री पादवल्लभ सर्वस्व दत्त, ब्रह्मा हरी शिव योगेश दत्त ।
हरेक मानिसको जीवनको महत्वपूर्ण कदम हो, विवाह । तर विवाहपछि केहिको जीवन सफल र सुखद रहन्छ भने केहिको जीवनमा खटपट हुने गर्दछ । केहिको त मनमुटाव कै कारण नाता तोड्ने स्थितिसम्म आउँछ । तर के तपाईंलाई थाहा छ, विवाह सफल नहुनुको पछाडि केको दोष रहन्छ ? विवाहमा मुख्यरुपमा शुक्र र बृहस्पति ग्रहहरु जिम्मेवार हुन्छन ।
यि दुईमा पनि सबैभन्दा बढी शुक्र ग्रहको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कुनै पनि वैवाहिक जीवन सफल हुन शुक्रसँगै चन्द्रमाको प्रभाव पनि उत्तिकै रहन्छ । त्यसैले कोही कसैको वैवाहिक जीवन सुखद भएन भने राशि अनुसारका निम्न उपाय गरेमा जीवन साथीसँग भएको आपसी खटपट घटेर जानेछ । र, पुनः प्रेममय जीवनको शुरुवात हुनसक्छ ।